थापाको घर नजिक राखिएका दुर्इ बम डिस्पोज गरियो | eAdarsha.com
थापाको घर नजिक राखिएका दुर्इ बम डिस्पोज गरियो
पोखरा, १७ मंसिर। नेपाली काँग्रेस कास्की क्षेत्र नम्बर २ प्रदेशसभा (ख) का उम्मेदवार विन्दुकुमार थापाको घरनजिक भेटिएको बम निस्िक्रय गरिएको छ।
आइतवार साँझ ९ बजेतिर संकास्पद बस्तु भेटिएको थियो। निलो जेब्रा झोला भरिएको अवस्थामा देखिएपछि प्रहरीलाई खबर गरिएको थियो। दुर्इ वटा बमलाई एक घण्टाको अन्तरमा नस्ट गरिएको छ। एउटालाई १०:०३ बजे र अको १०: ४८ बजे डिस्पोज गरिएको हो। नेपाली सेनाको बम डिस्पोजल टोलीले डिस्पोज गरेको हो।
विन्दुकुमार थापाको घरमै कास्की क्षेत्र नं. २ चुनाव प्रचार कार्यालय खडा गरिएको छ। बम पाँच घर माथि गल्लीमा भेटिएको हो।
थापा लक्षित गरी बम राखिएपनि बम पडि्कएको खण्डमा नजिकैको घरमा क्षति पुग्ने थियो। यस्तो अमानवीय हर्कतको स्थानीयले चको निन्दा गरेका छन्। प्रहरीले बम कसले राख्यो भन्नेबारे नखुलेको जानकारी दियो।
यसअघि गत मंसिर ८ गते बेलुकी बाम गठबन्धन कास्की क्षेत्र नं. २ प्रचार सचिवालयमा प्रेसर कुकर बम विस्फोट भएको थियो। यस्तै, मंसिर १० गते नेकपा एमाले कास्कीको पार्टीकार्यालय नजिकै दिउँसो पेट्रोल बम डिस्पोज गरिएको थियो।
यता उम्मेदवार थापाले चुनवाको नजिक लक्षित गरेर राखिएको वमले आशंका पैदा भएको बताएका छन्।